Jeff Kupietzky's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone | Peji 2 pa2
Munzvimbo dzanhasi dzekutengesa, kune akawanda midhiya chiteshi kupfuura nakare kose. Padivi rakanaka, zvinoreva mikana yakawanda yekubuditsa meseji yako. Kune rakadzika, kune makwikwi akawanda kupfuura nakare kose kutora vateereri kutarisisa. Kuwanda kwemidhiya kunoreva kushambadza kwakawanda, uye izvo kushambadza zvinonyanya kukanganisa. Haisi yekungodhindisa kushambadzira, yeTV kana redhiyo kushambadzira. Yakazara-peji online pop-up kushambadzira izvo zvinoita kuti iwe uwane zvisingawanzo "X" kubvisa